မူဆယ်ဈေးကွက်သို့ စိန်တလုံး သရက်သီး တင်ပို့သူများ အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းရန် နှိုးဆော်စာ ထုတ်?? - Yangon Media Group
မူဆယ်ဈေးကွက်သို့ စိန်တလုံး သရက်သီး တင်ပို့သူများ အရည်အသွေး ထိန်းသိမ်းရန် နှိုးဆော်စာ ထုတ်??
မူဆယ်၊ ဧပြီ ၂၆
ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)မူဆယ်ဈေးကွက်သို့ မြန်မာနိုင်ငံမှထွက်ရှိသော စိန်တလုံးသရက်သီးတင်ပို့သူများအ နေဖြင့် အရည်အသွေးထိန်းသိမ်း တင်ပို့ကြရန် မူဆယ်မြို့(၁ဝ၅)မိုင် သစ်သီးဝလံကုန်စည်ဒိုင်မှ အကြံ ပြုနှိုးဆော်စာထုတ်ပြန်ထားကြောင်း သိရသည်။ မြန်မာ့သရက်သီးများအနက်မှ ဟင်္သာ၊ စိန်တလုံးနှင့်အခြား သရက်သီးများကို သရက်သီးရာ သီချိန်တွင် မူဆယ်ဈေးကွက်မှ တရုတ်နိုင်ငံသို့ တင်ပို့လျက်ရှိပြီး စိန်တလုံးသရက်သည် ရင့်မှည့်မှု မှန်ကန်ပါက အနံ့အရသာအလွန် ကောင်းမွန်သော သစ်သီးအမျိုးအစားဖြစ်ကာ သရက်သီးထွက်ရှိချိန်တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှ ကြိုက်နှစ်သက် မှုပိုမိုများပြားသောကြောင့် ဈေး ကောင်းပေးဝယ်ယူလျက်ရှိသည်။
”စိန်တလုံးသရက်သီးကို ရင့်မှည့်တဲ့အနေအထားမရောက်သေးဘဲ ဈေးကွက်တင်ပို့နေသူတချို့ရှိတယ်။ စိန်တလုံးသရက်သီးကို ရင့်မှည့်နိုင်တဲ့အနေအထားရောက်မှသာ ခူးဆွတ်တင်ပို့ရောင်းချကြဖို့(၁ဝ၅)မိုင်သစ်သီးဝလံကုန်စည်ဒိုင်က အကြံပြုတိုက်တွန်းနှိုးဆော် သတိပေးတာပါ”ဟု မူဆယ်မြို့ သစ်သီးဝလံကုန်စည်ဒိုင်မှ ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးစိုင်းမြင့်ဗိုလ်က ပြောသည်။ မူဆယ်(၁ဝ၅)မိုင် ကုန်သွယ် ရေးဇုန်သို့ မန္တလေးနှင့်စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးတို့မှထွက်ရှိသည့် ဖရဲသီးများနှင့် ဈေးကွက်ဝင်ရင့် မှည့်သရက်သီးများကိုပါ တင်ပို့နေသည်။
”စိန်တလုံးသရက်သီးကို အရင်က ကျွန်တော်တို့ဆီက တင်ပို့မှ သူတို့စားရတာ။ အခုတော့ တရုတ်ပြည်မှာလည်း စိန်တလုံး တွေအကြီးအကျယ်စိုက်လို့ ထွက်သင့်သလောက်ထွက်နေပြီ။ တရုတ် ပြည်ကထွက်တဲ့သရက်သီးက မြန်မာသရက်သီးကို လုံးဝမမီဘူး။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဆီက သရက်စိုက်တောင်သူတွေ အရည်အ သွေးမကျအောင် ထိန်းသိမ်းရမယ်။ အသီးတွေမမှည့်သေးခင် မပို့ဖို့လိုတယ်။ အရည်အသွေးထိန်းတာနဲ့အမျှ ကျွန်တော်တို့ စိန်တလုံးသီး တွေ ရေရှည်ဈေးကောင်းရနေမှာ သေချာပါတယ်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံ သရက်သီးစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင် ပို့ရောင်းချသူများအစုအဖွဲ့မှ အတွင်းရေးမှူး ဦးကျော်စိုးနိုင်က ပြောသည်။
ယခုအခါ အမရပူရ၊ တံတားဦး၊ ကျောက်ဆည်၊ မြစ်သားနှင့် ပုသိမ်ကြီးမြို့နယ်များမှ ထွက်ရှိ သော စိန်တလုံးသရက်သီးများကို တစ်ရက်လျှင် ကား ၁ဝ စီးခန့် တင်ပို့လျက်ရှိကြောင်း၊ မူဆယ်ဈေးကွက်၌ စိန်တလုံးသရက်သီး ၁၆ ကီလိုတစ်ခြင်းလျှင် တရုတ်ယွမ် ငွေ ၁ဝဝ မှ ၁၅ဝ ခန့်အထိ ရရှိ နေပြီး အိတ်လွတ်တစ်ခြင်းလျှင် တရုတ်ယွမ်ငွေ ၈ဝ အောက်ရရှိသ ဖြင့် ပေါ်ဦးပေါ်ဖျားသီးများဈေး ကောင်း စတင်ရရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အမှုကို ကြားနာပြီးနောက် လက်ထိတ်ခတ်ပြီး ရဲစခန်းသို့ ခေါ်ဆောင်သွားခံခဲ့ရတဲ့ မင်းသား ပတ်ယူချန??
ဈေးကွက်အတွင်း အသုံးပြုနေသည့် QR code အားလုံးကို တစ်ပြေးညီ အသုံးပြုနိုင်ပြီး QR app များဖြင့် ပေးခေ
၂ဝဝ၂ ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ် ဆီနီဂေါ ခြေစစ်ပွဲအောင်
ဘက်စုံသုံး ရှယ်တာတစ်လုံး ဘီးလင်းတွင် အမြန်ဆုံး တည်ဆောက်မည်
သရုပ်ဆောင် ဝေဠုကျော် WLK တံဆိပ်ဖြင့် ဆိုင်ကယ်ရောင်းချ
အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဆက်ကပ်သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဘွဲ့တံဆိပ်တော်ကို သန်လျင်မင်းကျောင်း ဆရာတော်န
အခြေခံပညာကျောင်းများ ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး သဘာဝဘေးခံနိုင်စေရန် ဆောင်ရွက်နေ ဟုဆို